CANAB "XASUUS DHAKHTARKA QALIINKA": SHARAXAADDA NOOCYADA KALA DUWAN IYO SAWIRADOODA, TAARIIKHDA TARANKA IYO SIFOOYINKA KORAYA - BEERTA
Qaadashada xeebta Badda Badda - noocyo kala duwan oo canab ah "Xusuusin dhakhtarka qalliinka"
Rinjiga yaryar, caajis, laakiin aad u qurux badan oo qandaraas leh, oo leh berry macaan iyo ballaadhan - waxaas oo dhan waxay ku saabsan yihiin kala duwan "Xusuusin dhakhtarka qalliinka".
Ku dar arrintan xaqiiqda ah in hargab iyo fisiguba aysan qaadin, ma adagtahay in la fahmo beeralayda 'jacaylka miro-dhiska ee hiwaayadda.
Haa, tani si gaar ah uma qurxin derbiyada guriga, laakiin dhadhanka - ha soo baxin.
Ku saabsan canabta thermophilic "Xusuusta dhakhtarka qalliinka", iyo sidoo kale sharaxaad ka duwan kala duwan iyo sawirrada berry, waxaad ka baran doontaa in ka badan maqaalka hoose.
Sharaxaad ka mid ah "Xusuusiyaha Xajiyaha" noocyo kala duwan
Xusuusin dhakhtarka qalliinka - Mawduucyada hoose ee jilicsan ee lafaha hiwaayadda. Waqtiga Bisaylku waa hore, ubaxu wuxuu bilaabmaa Juun. Waxay caan ku tahay beeraleyda maxaa yeelay uma baahnid daryeel gaar ah, kama cabsanayso fangaska, halka berradku uu siinayo kariye iyo macaan.
Noocyo Pink sidoo kale waxaa ka mid ah Dubovsky casaan, Angelica iyo Gurmura casaan.
Waxaa badanaa loo isticmaalaa cusbo, sidoo kale waxa ku jira liinta iyo macmacaanka, oo aan caadi ahaan laga helin khamri. Berry waxay si fiican u dulqaadanayaan kaydinta iyo gaadiidka, ha jajabin oo ha kuulin. Soo iibso dalab fiican oo laga helo iibsadaha si aad u soo bandhigto bandhig fiican iyo faa'iido dhadhan.
Kuurkan waxaa lagu gartaa xoog korodh ah. Qayb ka mid ah cabbirka dhexdhexaad ah, wuxuu gaari karaa 700 g, si dhexdhexaad ah oo dabacsan, cylindrical ama cylindrical-mug-qaabeeya. Noocyada noocan oo kale ah sida Galbena Nou, Charlie iyo Rosemus ayaa si gaar ah u xoogan.
Berry waa mid aad u ballaaran, 12-14 g, oval, dahab leh casaan, ama casaan badan. Maqaarku waa mid qaro weyn, halkii aad u weyn, la cuni karo. Jidhku waa fareem, casiir leh, macaan oo macaan leh, macaan, laakiin aan xoqin jilicsanaan wacan, kaas oo ay ku qoran yihiin casaan iyo qajaar.
Ubax - Hermaphrodite. Caleemaha waa cagaar qani ah, wareegsan, dhexdhexaad ah, si adag u gooyey, saddex-dabool. Caleemaha waa brownish, oo leh buluug casaan mugdi ah.
Asya, faraca Rizamata iyo Romeo ayaa sidoo kale leh ubaxyo hermaphroditic.
Xusuusin dhakhtarka qalliinka - Natiijada shaqada ee naas-nuujiyaha hiwaayadda E. G. Pavlovsky. Waxaa lagu qaybiyey Badda Badda iyo gobollada koonfureed ee Ruushka. Waqooyiga looma helin sababtoo ah heerkulbiyadeedka. Gacanta qun-ka-qaadka ayaa ka mid ah Ayut Pavlovsky, Korolek iyo Super Extra.
Lagu dhawaaqay caabbinta barafowga -23 darajo Celsius, laakiin beeralay badan ayaa sheega in tiradu xoogaa hoos loo dhigo - xaqiiqda, kala duwanaantani waa taamaxafiin badan. Hal waddo ama mid kale, waxay u baahan tahay hoy aan lagama maarmaan u ah jiilaalka. Crystal, Pink iyo Super Earlyless Seedless sidoo kale waxay u baahan yihiin hoyga xilliga qaboobaha.
Ha ka baqanin kallana, dulin (xayrta budada ah - su'aal), si kastaba ha ahaatee, waa xayawaan dhadhan fiican leh oo looxyo iyo, cajiib ah, cajalado. Geedka canabka ahna si wanaagsan buu u socdaa - in ka badan saddex-meelood laba dhererka.
Geedka xididdada si fiican, waafaqsanaanta rootstocks waa mid ku qanacsan. Boqolkiiba heerka sonkorta - 19-22 Brixi, acidity - 6-8 g / l. Wax-soo-saarku waa celcelis, caadiyan loo baahan yahay. Dhulku wuxuu gooyaa lix illaa siddeed indhood, qiyaasta duurka barkiisuna waa 35. Jiilaalka Kherson Summer Resident, Rkatsiteli iyo Gift of Magarach waxay muujinayaan wax soo saarka sare.
Qaar ka mid ah tayada ayaa uxulmeen dhadhanka canabka this. Taasi waxay ka mahad celin, iyo tan inkastoo maqaarka cufan ee cufan. Sidaa daraadeed, dhammaantood waxay heleen qoysaska geela iyo hudheelka goobta ku yaala waxay ku xiran yihiin burbur, cayayaanka sunta ayaa la dhigayaa.
Rucubyadu iyaga laftoodu waxay ku qarsoon yihiin boorsooyin yaryar oo yaryar oo ka ilaaliya cayayaanka in ay gaaraan miro yar.
By habka - in kiiskan ma aha inaad dilaan ugaadhsiga xargaha, sababtoo ah ma aha oo kaliya iliga macaan, laakiin sidoo kale nadiifin beerta ka soo cayayaanka kale, sida aphids.
Shimbiraha ayaa ka cararaya, waxayna u ugaadhsanayaan canab dhan, laakiin cadowgani maaha mid cabsi badan - waa ku filan inuu ilaaliyo duurka isagoo leh shabakad adag oo aan caqli lahayn. Kubadaha "Signal" iyo boostarada oo sawiraya muraayadaha indhoolayaasha ah, wejiyada waaweyn ee shimbiraha dabiiciga ahi ma shaqeynayaan. Jadeecada, shimbiraha, magdhawga iyo qaylada ayaa si deg deg ah u ogaanaya in ay la socdaan sanka oo ay khalad u yihiin berry.
Cadow khatarta ah ee canab - phylloxera. Arrintaas, ra'yiga dadku way kala duwanyihiin, qaar ayaa ku doodaya in xusuusta qaliinka uusan ka baqeynin aphids, kuwa kale - lid ku ah.
Sidaa darteed waxaa lagama maarmaan ah in lagu buufiyo duurka leh disulfide carbon. Miisaanka lagu taliyey waa 300-400 cc mitir labajibbaaran. Waxay la socotaa qiyaastaas oo ah ukun, dirxi, iyo dulin-siinta dadka waaweyni u dhintaan. Run, way adkaan doontaa baadiyaha laftiisa, laakiin hal baadiyaha waa ka wanaagsan yahay beerta oo dhan - taasina waa waxa qiyaasta hooseeya ay kuugu jiraan.
Beeraha qaarkood waxay ku andacoodaan in 80 xabo oo ku filan, ka dibna baadiyaha waxay ku dhowdahay in la badbaadiyo si ay u noolaato, iyo aphid isma sheegi doonto muddo dheer.
Ha illoobin isticmaalka talaabooyinka ka hortaga cudurrada caanaha sida caanaha iyo oidiyum, anthracnose iyo bakteeriyo, chlorosis iyo rubella. Waqtiga lagu qaato, waxay ku ilaalin doonaan labada dhirta iyo beergooyska.
Dhexdhexaad dhakhtar qalloocan u fiican qof kasta, beeralayda khibrad leh iyo kuwa bilowga ahba. Ma dalbanayo inuu naftiisa daryeelo, aan qabin, runta - thermophilic, sida ku habboon miro koonfurta.
Waxaa fiican in aan caajis ahayn oo si habboon uga ilaalin phylloxera iyo wasps - ka dibna macmacaanka iyo berry macaan oo aan la xishoodin in lagu iibiyo laguma wareejin doono miiska.